Taotrano sy asa vaventy 50%-n'ireo mpandraharaha no efa nampiato ny asa
Mpandraharaha Malagasy Lasa ifaninanan’ny fitondram-panjakana
Maro ny orinasa amina sehatra isan-karazany tafatsangan’ny fitondram-panjakana vetivety teo tao anatin’izao hahamehana ara-pahasalamana izao izay rehefa dinihina dia lasa mifaninana amin’ireo orinasa tsy miankina isan-karazany kanefa dia fanamby napetraky ny filoham-pirenena Malagasy,
EDBM Hampiroborobo hatrany ny fananganana orinasa
Ao anatin` ny famolavolana sy fametrahana atrikasa maimaim-poana sy amin` ny alalan` ny aterineto ny sampanadraharaha mampiroborobo ny toekarena mikasika ny fampiasam-bola sy famoronana orinasa eto amintsika na EDBM (Economic Development Board of Madagascar), amin` izao fotoana izao.
Fampindramam-bola Orinasa 110 no efa nisitraka ny “Crédit Miarina”
Sehatra miisa 4 no mahazo tombony amin’ ny tetikasa fampindramam-bola « crédit miarina » dia ny fambolena, ny fiompiana, ny Indostria ary ny fizahantany entina hanampiana ireo sehatra tsy miankina nisedra olana amin’izao hamehana ara-pahasalamana ateraky ny aretina covid 19 izao.
Nisy ny fivoriana sy ny fifanakalozana nijerevana ny olana atrehan’ ireo mpandraharaha misehatra amin’ny taotrano sy ny asa vaventy tetsy amin’ny Hotely IBIS Ankorondrano omaly.
Nanambara ireo mpandraharaha mivondrona ao amin’ny SEBTP (Sendikan'ny Orinasa misehatra amin'ny taotrano sy asa vaventy) fa raha mitohy ny krizy ka tsy misy ny vahaolana mazava avy amin’ny fanjakana dia ahiana ny hahafatesan’ ireo orinasa misehatra eo amin'ny tontolon'ny taotrano sy ny asa vaventy ireo afaka fotoana vitsy. Amin’izao fotoana izao mantsy dia ny 50%-n'ireo mpikambana ao amin'ity sendika ity no efa nampiato ny asany kanefa izy ireo no mampidi-bola hatrany amin’ny 90% eto amin’ny firenena amin’io sehatra io. Nilaza ihany koa ny teo anivon’ny SE-BTP tamin’ny alalan’ny filohany, Hary Andriantefihasina fa tena olana ny tsy fahampian’ny vola ho entina miodina (trésorerie) izay sakana tsy ahafahana manafatra ny akora sy ny fitaovana any ivelany ary efa tena manahirana na ny handoavana ny karaman’ny mpiasa aza. Sarotra hoy izy na ny fandefasana mpiasa any amin’ny faritra aza amin’izao fotoana izao raha tsy hilaza fotsiny ny olana any Toamasina. Manginy fotsiny ny fijanonan’ny Orinasa Ambatovy teto Madagasikara izay misandrahaka mampiasa olona maro be amin’io sehatra io izay mitarika ny fihenan’ny vola miodina (chiffres d’affaires) hatrany amin’ny 50% ihany koa amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy holaharam-pahamehana ny findramam-bola eny amin’ny Banky kanefa fantatra ihany koa hoy izy ireo ny fidanganan’ny zana-bola alain’ny Banky eto Madagasikara. Nilaza ihany koa ny Filohan’ny Sendika fa andrasana ny fihaonana amin’ny Filoham-pirenena izay efa nampanantena fa handray azy ireo manokana. Antenaina hoy izy ny fanohanana ny orinasa Malagasy izay manana traikefa feno sy ampy amin’ny fanatanterahana tetikasa fananganana fotodrafitr’asa goavana eto amin’ny firenena. Tsiahivina fa miisa 6000 ka hatramin’ny 12 000 ny mpiasa misehatra amin’ny sehatra taotrano sy asa vaventy eto Madagasikara.